चुनावमा जानु प्रतिगमन हो भने तपाईले खोजेको व्यवस्था के हो ः प्रम ओली | Ekhabar Nepal
राजनीति फागुन १ 2077 ekhabarnepal
नयाँ नक्सा छाप्ने वित्तिकै पदबाट हट्न भने ः प्रम ओली
काठमाडौं, फागुन १ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको बीचमा गएर निर्वाचन गर्नु ‘प्रतिगमन’ नभएको बताउनुहुँदै निर्वाचन भएर छाड्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
नेकपा लुम्बिनी प्रदेशद्वारा शनिबार बुटवलमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले त्यस्तो बताउनुभयो । देश हैन, आफूलाई बनाउन हिँड्ने केही नेताहरु आज सडकमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । “देश बनाउने उद्देश्य नबोकेका तत्वहरु अहिले पार्टी छाडेर बाहिरिएका छन्” उहाँले थप्नुभयो, “चुनाव हुने भनेको कसरी प्रतिगमन ? ताजा जनादेशका लागि जनताबीच जानु कसरी प्रतिगमन ? तपाईहरुले कस्तो व्यवस्था खोज्नुभयो ? ”
प्रतिनिधिसभा संविधानसम्मत ढङ्गले विघटन गरेको प्रष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “देश अस्थिरतातर्फ जाने देखिएपछि, काम गर्न नदिएपछि बहुमतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संसद विघटन गरेको हुँ ।” देशलाई अस्थिरतातर्फ अदालतले फर्काउने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट लगायतले बोल्नुभएको थियो । सो अवसरमा नेकपा नेता गिरिधारीलाल न्यौपानेद्वारा लिखित पुस्तकको प्रधानमन्त्री ओलीले लोकार्पण गर्नुभएको थियो ।